Sidee smart boorsooyinka gudbin safarka hawada - Rule News
Sidee smart boorsooyinka gudbin safarka hawada
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Sidee smart boorsooyinka gudbin safarka hawada” waxaa qoray Rob Walker, waayo Observer The on Sunday 15 November 2015 00.05 UTC
Ha ugu welwelina waxaad ka heli suga WAYDAARKA alaabta ee garoonka diyaaradaha? waxaan. Oo dheer ku qaadato in aan boorsooyinka u muuqdaan, edgier aan ka helo. Waa = cabsi ah oo la joogo in marka kaliya sacab muggiis oo boorsooyinkooda u garaacayeen yihiin hareeraha trundling, mid ka mid ahaa kuwaas oo idinkaa iska leh.
Laakiin qiyaasi, sida aad ku degdegin inaad miiska waydiinta inay ka hadlaan fekerkooda aad caajisnimo aad hesho qoraal ah oo ku saabsan telefoonka ku yidhi: "Waxaan ahay on WAYDAARKA 5, ee kaalay oo i soo qaado. "
Your boorso waa wax soo saarka ugu danbeeyay in la siiyo tiriyo garoomada technology a, iyadoo in-la dhisay GPS statistics iyo fariimaha. Taas macnaheedu bacaha awoodaan in ay xubnuhu aad phone noqon doonaa oo kuu soo diri qoraal ah oo ku saabsan meesha ay joogaan, marka ay la soo qaado diyaarad ama haddii uu qof iyaga ka furmay adiga oo aan ogolaansho.
Laakiin waa "boorsooyinka smart" fulinta baahida user a?
Ramesh Tainwala, Maamulaha Guud ee shirkadda boorsooyinka Samsonite, ayaa sheegay in aanay ahayn qaab ah. Waxa uu saadaaliyay technology gundhig u noqon doonaa orgida sida weyn dunida boorsooyinka sida giraangiraha shandado 1970.
"Boorsooyinka Smart xiriiri doonaa hal dhinac la milkiilaha iyo dhinaca kale ah la sidayaal ah u taabato. Wax walba waa la xidhayaa. Tani waxay noqon wax ku xigta ee weyn doono,"Ayuu yidhi.
ka hor in ay boorsooyinka u malayn in laftiisa in ka eegi kartaa madaarada ama shandado kaxaynta gaadhi in aad la raaci karaan agagaarka, yara sida eey oo kale joofane.
Ka dib markii uu hogaanka u ah noocyada fashion la isku kaashanayaa shirkadaha casriga ah si ay u sameeyaan xuub dareemayaal taam galay dharka, sidaa Samsonite waa shuraako la Samsung oo bilaabaysa kala duwan oo cusub oo boorsooyinka ku xiran by dhamaadka sanadka.
Ma aha oo dhan ee hal-abuurnimo this waxaa ka soo magac magac weyn, waxaa jira tiro sii kordhaysa ee bilowga-ups riixaya xuduudaha aad. Ku salaysan US Planet socotada ayaa u jeestay inaan website-ka crowdfunding Kickstarter si ay uga caawiso in aan bilowno Case Space ay 1. Its qalabka hi-tech ka mid ah quful faraha jismiyeed, raadraaca caalamka, qolfo digital is-miisaankeedu, ku hadla xitaa Bluetooth in jeedin kartaa boorso ku riday sanduuqa kaca ama phone a.
"Boorsooyinka Smart waxaa laga faaiidaysanayo galay shaki badan in aan ka qabto wax ma arrin sax ah,"Ayuu yidhi Richard Cope, a-rogga ah falanqeeye ee kooxda cilmi, Mintel. "Waa casriga 'guriga smart' bixiddaada dunida furan galay."
Kabuubiso shaki badan in uu yahay ganacsi qaali ah, in kastoo. Space Case The 1 ayaa la filayaa inay ku saabsan £ 450 kiish size-full ee, iyo £ 390 ee hartey-on.
Laakiin doono GPS-raad boorsooyinka sabab xaalad jahawareer ammaanka garoonka diyaaradaha? Sidee square la kuwa xasuusin joogto ah oo xidhaysa teleefoonada meel u dhow diyaarad?
Tainwala qirtay waxaa jira arimo, laakiin aaminsan in ay u dhow yihiin in ay iyaga xalinta. Isagu waa si kalsooni, dhab ahaan, in uu aaminsan yahay technology noqon doonaa inuu muhim u yahay oo dhan boorsooyinka Samsonite ee shan soo socda si ay u 10 sano. "Haddii aad u dhaqaajiso ama ma, boorsooyinka oo kaliya iman doonaa waxa la,"Ayuu yidhi. Qaar kale ma aha sidaas qanacsanahay.
May Ling, Tababaraha kooxda cilmi-baarista ee shirkadda sirdoonka suuqa Euromonitor a, ayaa sheegay in: "Boorsooyinka Smart la baadho doonaa by securities dowladda adduunka oo dhan. Mid ka mid ah qiyaasi karaa qaadashada 'wanaagsan ammaan badan ka xumahay' hab oo mamnuucay waxaa gebi ahaanba si looga fogaado dhibaatooyinka. "
Department for Transport ka gaabsaday inuu ka hadlo. Waa daruuri, laga yaabee, dayuuradaha weyn ayaa la fahamsan yahay inuu doonayo for boorsooyinka smart in ay jebiyaan galay caadiga ah iyo la shirkadaha sida Samsonite shaqeeya si gudoohoda baxay caqabadaha ammaanka.
Cope ayaa sheegay in: "Boorsooyinka Smart macno for warshadaha - ay doonayaan in ay wax sida hufan ee suurtogalka ah."
Laakiin waxa ku saabsan macaamilka? Eleanor Aldridge, editor sare oo ka tirsan xanafta Guides, ka publisher Hanuuniyaa safarka, su'aalo, haddii aannu diyaar u noocan ah technology yihiin, gaar ahaan sababtoo ah "detoxing digital" - fasax la'aan casriga ah ama xidhiidh la internet-ka - waa mid aad loo jecel yahay.
"Socdaalka rabto in aad ogaato miisaanka u dhexeeya casriga in Hodmin Socdaalkoodii oo darbi in iyaga xerin galay isku xirnaanta joogto ah", ayay tidhi.
Aldridge saadaaliyay qaar badan oo darbi ee boorsooyinka smart si deg deg ah taariikhda doonaa, laakiin aaminsan in muuqaalada sida GPS statistics noqon kartaa hadhid badan.
"Haddii aad sugayso boorso garoonka diyaaradaha ama aad tuuray boorso on in saqafka sare ee baska safarka 10-saacadood ah, garanaynin meeshuu waa bixisaa nabad weyn ee maskaxda,"Ayay tidhi.
Waxaa laga yaabaa in wax kale waayo magac smart-boorsooyinka laga walwalo, in kastoo. Cope saadaaliyay in mustaqbalka aan dhibin doonaa in ay alaabahooda oo dhan. Halkii, marka aan helno si aannu u socoto, dharka iyo waxyaabaha ay u baahan tahay our safar horay halkaas ayaa sugi doona noo, kiraystay ka hor inta aan joogo. "Waana halka aan madax,"Ayuu yidhi.
Ma boorsooyinka smart wax badan ka dibna, sida boorsooyinka ma at dhan.
27313	0 gaadiidka Air, Qodobka, Qalab, Nolosha iyo style, qaybta Main, News, Rob Walker, Samsung, Technology, Observer ayaa, news UK, technology wearable, news World
← From baabuurta driverless in jetpacks batari New smartphone qaadi karaan si ay u 48% shan daqiiqo →